Dammaanadeena - Jesson Flag Arts & Crafts Co., Ltd.
Dhammaan alaabooyinka ay iibiyaan Shiinaha-Calanka-Sameeyayaasha ayaa lagu damaanad qaadayaa inay yihiin kuwo tayo sare leh oo lagu raro waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah. Mar alla markii wax kasta oo khalad ahi dhacaan, waanu la tacaali doonnaa isla markiiba oo waxaannu yareyn doonnaa khasaaraha inta suurtagal ah.
Daabacaad Hubin Tayo leh
Sheegashooyinka damaanadda Shiinaha-Calan-sameeyeyaasha waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidnayn:
Awoodin in la raaco tilmaamaha isku imaatinka, qoraallada ama fiirsashada ku lifaaqan
Gabowga caadiga ah ee alaabada, oo ay ku jiraan qalabka iyo daabacadaha
Si xun u isticmaalka iyo wax ka beddelka alaabta
Khasaaraha masiibooyinka dabiiciga ah, sida duufaanta, dabeylaha xoogan iyo duufaanka culus
Arrimaha tayada daabacadaha ama qalabka aan iibin ama soo saarin Shiinaha-Calanka-Sameeyayaasha
China-Flag-Makers waxay xaq u leedahay inay sameyso xukunka kama dambaysta ah ee khilaafaadka damaanad kasta, oo ay ku jiraan go'aanka ugu dambeeya ee sababta iyo mas'uuliyadda waxyeellooyinka iyo sidoo kale go'aanka ugu dambeeya ee xalka dammaanadda iyo jawaab celinta
Nolosha badeecaddu waxay kuxirantahay isticmaalka dhabta ah, dhammaan badeecadaha daabacan ee ay sameeyeen Shiinaha-Calanka-Sameeyayaashu waxay leeyihiin muddo damaanad ah.
Muddada damaanad-qaadka ee dhammaan qalabka, agabka iyo sawirada waa hal sano. Haddii sheyga waxyeello u geysto arrimo aan aadanaha ahayn hal sano gudahood, badeecadaha waa la beddeli karaa. Fadlan hubi in qalabka, qalabka iyo garaafyada ay xaalad fiican ku jiraan marka hore marka la helo badeecada. Haddii dhibaatooyinka tayada ay soo ifbaxaan 5 maalmood gudahood ka dib markaad hesho badeecada, waxaan baddali doonnaa badeecadda bilaash ah waxaanna qaadi doonnaa khidmadda dhoofinta. Haddii dhibaatooyinka tayada ay soo baxaan 5 maalmood ka dib markaad hesho badeecada, waxaan baddali doonnaa badeecadda bilaash, laakiin ma qaadi doonno khidmadda dhoofinta.
Haddii arrinta tayada leh ay dhacdo markii la helayo alaabada, marka hore fadlan hubi haddii sanduuqa dibedda uu waxyeello gaadhay iyo in kale. Haddii uu jiro waxyeello soo gaadhay sanduuqa dibedda, fadlan sawirro ka qaad sanduuqa dhaawacmay iyo alaabooyinka waqtigooda. Haddii sanduuqa kore uusan waxyeello soo gaarin, fadlan sawirro ka qaad alaabooyinka dhaawacmay. Fadlan soo gudbi khilaaf la xiriira sharaxaadda arrinta iyo sawirrada dhammaan badeecooyinka waxyeelloobay markii aad hesho alaabada oo aad aragto waxyeellooyinka. Kadib markaan helno sawirro laxiriira dhibaatooyinka tayada, waxaan magdhow ka sameyn doonnaa alaabada waxyeelada soo gaartay kadib xaqiijinta.
Ma aqbalno soo celinta iyo is-weydaarsiga marka midabka garaafku uu yaraado isticmaalka muddada dheer.
Fadlan ha u isticmaalin teendhooyinka xilliga cimilada daran, sida roob xoog leh iyo dabayl, haddii kale, way dhaawici lahaayeen.
Waan ognahay in tayada ay tahay tan ugu sareysa ganacsiga dhalaalaya, marka waxaan u qaadaneynaa si dhab ah. Waxaan balanqaadeynaa markey dhibaato walboo dhacdo, INAADAN dhaafi doonin walxaha.
Waxaan ahmiyad weyn siinaynaa adeegga iibka kadib, markaa fadlan la xiriir wakiiladeena adeegga macaamiisha markii ugu horreysay, waxaan heli doonnaa xalka ugu fiican ee yareyn kara khasaaraha waqtiga ugu yar.